Bandhig Faneedka OTDYKH Leisure Fair 2021 Waxaa Lagu Qaban Doonaa Magaalada Moscow Sebtember 7-9
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » Bandhig Faneedka OTDYKH Leisure Fair 2021 Waxaa Lagu Qaban Doonaa Magaalada Moscow Sebtember 7-9
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Bandhig Faneedka OTDYKH 2021
Ka dib guushii carwadii safarka ee sanadkii hore in kasta oo ay jireen caqabado, OTDYKH waxay u soo laabatay daabacaaddii 27aad ee bandhigga. Munaasabaddu waxay dhici doontaa 7-9ka Sebtembar waxaana lagu qaban doonaa barxadaha bandhigga ee EXPOCENTRE.
Waxaa jiri doona 400 shirkadood oo ka kala socda 16 dal iyo 50 gobol oo Ruush ah ayaa la filayaa inay ka qeybgalaan dhacdadan safarka iyo dalxiiska ee ugu horreysa.
Gobolka iskaashiga rasmiga ah ee bandhigga 2021 waa Nizhny Novgorod.
Bandhigyo badan oo caalami ah ayaa la filayaa inay ku laabtaan carwadan safarka ee muhiimka ah.
Sannadkan qiyaastii 400 shirkadood ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan 16 dal iyo 50 gobol oo Ruush ah. Mar labaad, Carwadii Madaddaalada ee OTDYKH ayaa lagu wadaa inay muujiso sababta ay ugu tahay dhacdada safarka iyo dalxiiska ee Ruushka.
Sannadkan waxaa soo laabanaya deeq -bixiyeyaal badan oo caalami ah. Wadamada ka qeyb galaya 2021 OTDYKH Bandhigga Madadaalada waxaa ka mid ah Spain, Qubrus, Bulgaria, Thailand, China iyo qaar kaloo badan. Dhowr waddan oo Laatiin Ameerika ah ayaa sidoo kale soo bandhigi doona kuwa ugu wanaagsan waxa ay warshadaha dalxiisku leeyihiin.
Mid ka mid ah waddamadaas waa Cuba, oo ka qeyb qaadan doonta istaag 100m² oo cajiib ah, oo calaamad u ah ku-noqoshada qaabkii hore ee masiibada ee bandhigga. Bandhigga wuxuu kaloo ku faraxsan yahay inuu ku soo dhoweeyo qof ku cusub xafladda; gobolka Ceará ee Brazil, kaas oo lahaan doona meel gaar ah. Gobolku wuxuu ku yaal waqooyi -bari ee dalka waana mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee loo dalxiis tago ee Brazil. Gobolku wuxuu ku faanaa 600 kiiloomitir ballaaran oo xeeb bacaad ah wuxuuna xuduud la leeyahay Kaymaha Qaranka ee Araripe.
Bandhigu wuxuu kaloo soo dhoweynayaa shirkadda socdaalka ee Meksiko 'Toddoba Tours' oo leh khibrad ka badan 25 sano xagga warshadaha dalxiiska. Toddoba Tours ayaa ka qaybqaadan doona meel fog waxayna soo bandhigi doonaan kala duwanaanshaha dalxiiska Mexico, oo ay ku jiraan xeebaha neefsashada ee Mexico, caadooyinka hodanka ah, cunnada dhabta ah iyo dhaqanka gaarka ah. Waxay sidoo kale soo bandhigi doonaan martigelinta cajiibka ah ee Mexico ay tahay inay bixiso.
Dalxiiska Ruushka ayaa ku soo noqnoqonayay caafimaad qab, markan e-Visa-ga cusub ee Ruushka ayaa xitaa sahlay in la booqdo dalka. Markay timaado gobollada Ruushka, laba qof oo cusub ayaa ku biiri doona Bandhigga Fasaxa ee OTDYKH. Midda koowaad waa gobolka Khanty-Mansi, oo hoy u ah Kaniisadda Ortodoks ee Quruxda badan. Midda labaad waa gobolka Krasnoyarsk kaas oo caan ku ah muuqaal -dhismeedyada dabiiciga ah ee cajiibka ah. Caasimadda gobolka waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Siberia.